Dhizaini yeHJK-E akateedzana Akasanganisa Mhepo Kubata Yuniti, inoenderana neGG / T 14294-2008 National Standards zvakanyatso, uye inochengeta kudzamisa R&D uye nekuvandudza kwenguva, yakasimbiswa inotungamira mukana paHoot Recovery Technology. Chizvarwa chitsva chaHoltop che "U" Series Air Handling Unit, chave kupfuura mwero zvakajairika muhunhu hwakawanda hwekuita.
Rakaomarara ChikamuKugadzirwa kweAHU Nyaya: Chaizvoizvo 61 mhando dzeChechi Chikamu Dhizaini yeAHU Nyaya, mechi kune yakanyanya kutaurwa mweya vhoriyamu inoda. Zvichakadaro, kuti tigadzirise akasiyana mweya vhoriyamu muyero pakati pekupa mweya & pedza mweya kune akasiyana mashandisiro ekushandisa, Holtop inogadzira yakawedzera Deformation Chikamu dhizaini zvinoenderana, kuvimbisa kuita kweAHU, uye kunoita compact compact AHU saizi panguva imwe chete, kuchengetedza mutengo & nzvimbo yemuchina nzvimbo.
Standard ModuleDesign: Tora muyero Module dhizaini, 1M = 100mm. Module dhizaini inoita kuti AHU iumbane sezvinobvira, ukuwo ichigadzira dhizaini nekugadzira zviri nyore & zvakaenzana.
Inotungamira Core Technology yeHeat Kudzoreredza: HJK-E Series AHU, inogona kushongedza nemhando dzakasiyana dzekudziya kupisa. Rotary kupisa exchanger inonyanya kuenderana & yakafara mweya mafomu ekushandisa. Plate kupisa exchanger yakaderera mitengo neyakakodzera kupora reshiyo. Pipe yekupisa kupisa exchanger iri nyore kuchengetedza uye kushandisa zvakanyanya; Glycol kutenderera kupisa exchanger ine zero muchinjikwa kusvibiswa & yakakwira hutsanana danho. Mhando dzakasiyana dzekudziya kupisa dzinogona kugutsa akasiyana simba ekuchengetedza magetsi.
Aluminium Allay Sisitimu & Nylon Cold Bridge: Tora simba rakakwira mbiri dzinoumbwa nealuminium alloy sisitimu, simba remagetsi kusvika kuD2 giredhi. Cold Bridge yakagura dhizaini ine yakawedzera PA66GF yekumhara strip, inotonhora bhiriji chinhu kusvika TB2 giredhi. Zvichakadaro, nyowani yakagadzirirwa chisimbiso chimiro chemhepo inodonhedza chiyero <1%, inowana kuchenesa mweya kutonhodza zviyero.
DoubleSkin Panels: Yakajairwa "Sandwich" dhizaini dhizaini, ine 25mm & 50mm maviri magadzirirwo. Ganda rekunze Ruvara Simbi Sheet chena ruvara inoenderana nealuminium alloy furemu. Romukati ganda iri kwakakurudzira simbi jira, Stainless simbi jira iri Opsioneel kuti kugutsa inokosha chikumbiro kudiwa. PU inopupuma kuputira zvinhu zvinopa yakanakisa yekupisa yekuisa chivakwa. Iwo mapaneru uye mapuratifomu akasungwa zvakavharwa, mukati memukati mune kumeso uye kwakachena hutsanana.
Flexible accessories inowanika: VP & Moistureproof Lamp yeSevhisi Suo inosarudzika, iyo yekumanikidza switch kana kusiyanisa kumanikidza mita yemasefa inosarudzika, futi. Mhepo inlet kana chiteshi chakashongedzerwa nemhepo yakavharika damper inosarudzika. Mazhinji accessories anowanikwa.
Yepamusoro kuita kutonhora / kudziyisa mvura ma coils: Holtop mvura ma coils anozvimiririra akaongororwa uye akagadziridzwa, ayo akagadzirwa emhando yepamusoro mapaipi emhangura aruminiyamu mapini, kuburikidza nehunyanzvi hwekuwedzera tekinoroji yekubatanidza kwakazara, ine yakanakisa kupisa kutamisa mashandiro. Mushure mekukoira, iyo PVC kana isina simbi mvura inobvisa mvura inogona kuiswa. Uye condensate tireyi inogona kuiswa kuti ive nechokwadi chakakodzera kubuda kwe condensate.
Mazhinji mafirita emubatanidzwa: HJK-E dzakateedzana unit inopa mubatanidzwa wefirita uye mafirita eakasiyana maratidziro kuzadzisa zvido zvemushandisi kune akasiyana akachena kufefetera.Iyo yakaoma mafirita anogona kuzadzisa izvo zvakajairika zvinodiwa zveiyo kufefetwa system, iyo yepakati mafirita anogona kusangana ne zvinowanzodiwa zvekuchenesa mweya. Iyo PM2.5 yakasara mafirita ndeyokusarudza, girini mweya haisisiri kure kure. Uye zvakare, akakosha mafirita ekuchenesa emagetsi uye zvimwe zvinoshandiswa zviripo.
Yakakwira mhando fan: Zvakasiyana-siyana zvemhando yepamusoro fansare sarudzo, kusanganisira yakananga kutyaira kaviri suction centrifugal fan, kukweva kumberi kumberi / kumashure centrifugal fan, plug fan, EC fan uye zvichingodaro. Fan nzira yokubuda uye flange vari nyoro zvakabatana. Izvo zvinokatyamadza-zvinobata zvinhu pakati peiyo fan uye hwaro hunogona kusiyanisa iyo vibration zvinobudirira.
Chinotarisirwa kugadziridza: Iyo unit inoshandisa akawanda akaenzana zvikamu, izvo zvinogona kuve nyore Iyo unit yakagadzirirwa neinodiwa yekuwana mikova uye inogona kuve yakagadzirirwa neanowona mawindo uye mwando chiratidzo chemwenje kuita nyore kugadzirisa. Chikwata cheplaneti chinogona kubviswa kunze, zviri nyore kupaza. Mapaneli akashongedzwa nemachira ekushongedza, maburi ezvipikiri haatapure kutaridzika kwechikwata.
Pashure: Kupisa Kwekudzoreredza Kwemhepo Kubata Units
Zvadaro: Airwoods Ceiling Mhepo Inonatsa